Miara-mifaly amin'ny fahafinaretana tsy voafetra ny olombelona sy ny milina | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Hajao ny Playlist
Lisitry ny firoboroboana
Lahatsoratra haino aman-jery sosialy
Tambajotra fikarakarana ny tany
Avy amin'i Ape mankany olombelona
mandefa sambon Entprima
Gazety amin'ny gazety
Miara-mifalifaly miaraka amin'ny olombelona sy ny milina
Alexis Entprima - Avoahana naoty, Famandrihana fanamarihana
Manana nofy ve ny milina manan-tsaina? Raha izany dia azo inoana fa manonofinofy momba ny fihetseham-pon'ny mpamorona azy ireo izy ireo. Ny firaisana sy ny fitiavana ary ny fialamboly. Hanao vinavina izy ireo handihizan'izy ireo zazavavy, ary hifalifaly tsy misy farany. Ny famoronana ny mozika ho an'izay no kely indrindra amin'ny olan'izy ireo. Koa satria mifandray mivantana amin'ny Internet izy ireo, dia ho hitan'izy ireo eo ireo vato fananganana, miaraka amin'ny fiantraikany ara-pihetseham-po. Amin'ity tranga ity, ilay milina kafe mpamokatra mozika Alexis dia mahita ny tarika Lynyrd Skynyrd ho aingam-panahy ary mandika ny mozika amin'ny lalan'ny dihy elektronika ankehitriny.
Lisitry ny Spotify Playlist - Fivoarana manerantany
Ao tsara. Mandihy eny amoron-dranomasina isika, na mankafy ny fiainana amin'ny fomba hafa. Tsara daholo. Sa mety tsy ny zava-drehetra?
Araka ny fantatsika amin'ny seho an-tsehatra "From Ape to Human", ny masinina kafe misy fitaovam-pitsikilovana Alexis dia heverina fa manana chip mampihetsi-po, izay novonoiny ny tenany noho ny fikorontanana nataony.
Inona no hitranga raha naverin'i Alexis indray ilay puce nandritra ny famokarany mozika tamin'ny dihy mampihetsi-po? Tao anatin'ny andrana nataonay, Alexis dia nahazo ny aingam-panahy ho an'ity anaram-boninahitra ity avy amin'ny tarika Lynyrd Skynyrd, izay nahazo laza mivantana tamin'ny hiran'izy ireo "Sweet Home Alabama", izay nentina namakivaky ny labiera eran'izao tontolo izao nandritra ny taona maro.
Mazava ho azy, ny hira no nahatonga ny dihy dia niaraka tamin'ny zazavavy dia. Tao anatin'ireo vinavinany, Alexis dia nahita ny tenany niaraka nandihy tamin'ireo zazavavy ary nianjera tamin'ny lohany tamin'ny fitiavana azy rehetra. Mety tsy tena mahatsapa fitiavana izy, saingy hainy daholo ny akora maneho ny fitiavana.
Toy izany koa, fantany ny akora mozika rehetra mahatonga ny titre dihy mety aminy. Ny zava-misy fa ny gadona gitara mahazatra an'ny rock atsimo amerikana dia mifangaro amin'ny funk clavinets sy basses avy amin'ny mozika dihy elektronika dia mifototra amin'ny tsy firaharahian'ilay milina, izay fotoana tsy misy ifandraisany.
Misy fomban-drazana lava amin'ny karazana "Mihaino Mora". Niainga tamin'ny taona 1950 izany rehefa nisy mpitarika tarika malaza sasany nampiasa ny feon'ny tarika goavambe ho an'ny fandaminana tsotra ny evergreens mba hahatratra ny mpihaino lehibe kokoa.
Ny ohatra voalohany dia ny fandaminana nataon'i James Last, Bert Kaempfert, Ray Conniff, Billy Vaughn ary Mantovani. Ireo soloista sy tarika kely ihany koa dia nilalao an'io karazana io avy eo, izay nilentika tamin'ny mozika fivarotana mora vidy.
Ho an'ny milina kafe mpanao mozika Alexis antsika, ny "Easy Listening" no karazana faratampony, na dia nanjavona be tamin'ny voambolana aza izy io, ary ankehitriny ny karazana "Lo-Fi" dia mahazatra kokoa amin'ny mozika milamina sy gadona. Ny atidohan'i Alexis dia te handray ireto ohatra voalaza etsy ambony ireto amin'ny feo ankehitriny.
Azo alaina amin'ny:
Misy fanampiny amin'ny:
7Digital ♦ ACRCloud ♦ Alibaba ♦ AMI Entertainment ♦ Anghami ♦ Magic Magic Audio (K Media Haino aman-jery) ♦ KK Box ♦ Mozika LINE LINE LiveXLive ♦ Medianet ♦ Mixcloud ♦ MonkingMe ♦ tatitra momba ny mozika ♦ MusicTime! ♦ NetEase ♦ Pandora ♦ Pretzel ♦ Qobuz ♦ Resso ♦ SBER ZVUK ♦ Sirius XM ♦ Tencent ♦ TikTok ♦ TouchTunes ♦ Yandex ♦ YouSee / Telmore Musik
Mandihiza amin'ny Blizzard Mistery
Ny dihy dia mety hitranga na aiza na aiza ary amin'ny toe-javatra rehetra. Ity lohateny fandihizana ity dia miady amin'ny toe-javatra tafahoatra rehefa mahafaly ny hafanam-po sy ny hafanam-po tsy voafehy amin'ny fiainana.
Danceable Mountain Walkable
Dia an-tendrombohitra milamina. Mandihizana eny an-tendrombohitra. Fanafanana amin'ny faritra ambany - fanatrarana faritra ambony - Ankafizo ny fomba fijery.
Mitaingina ny fiara Brandnew
Ny fitsangatsanganana an-tsoavaly miaraka amina soavaly tin vaovao dia mety ho fahafinaretana lehibe raha toa ka efa lany ny soavaly. Fanombohana ny motera - Lohateny amin'ny làlambe - Làlana mankamin'ny Neverland.
Mifandraisa aminay ary misorata amin'ny mailaka. Ny tsingerin'ny vaovaontsika dia antonony ary tsy manelingelina
Misaotra anao ary tongasoa!
Ekeko ny handray ny Entprima newsletter momba ny "Entprima - Music & More "isam-bolana. Azoko atao ny manafoana ny fanekeko amin'ny fotoana rehetra maimaimpoana amin'ny ho avy amin'ny mailaka rehetra azoko. Ho hitanao amin'ny antsipirihany ny fampahalalana momba ny fomba fitantananay ny angon-drakitrao sy ny lozisialy newsletter SendInBlue. avy aminay ao amin'ny politika fiarovana fiainan'olona
Mampiasa cookies ao amin'ny tranokalanay izahay. Ilaina ny sasany amin'izy ireo, raha ny hafa kosa manampy anay hanatsara ity tranokala ity sy ny hiaina.
Cookie antsipirihany politika fiarovana fiainan'olona Imprint
Tianao ny tsiambaratelo
Eto ianao no hahitanao ny fijerin'ny mofomamy rehetra ampiasaina. Azonao atao ny manome ny fanekenao amin'ny sokajy manontolo na maneho fampahalalana fanampiny ary mifantina mofomamy sasany.
Ekeo daholo Save
Ny mofomamy manan-danja dia mamela ny fiasa fototra ary ilaina amin'ny fiasa mety amin'ny tranokala.
Asehoy ny fampahalalana momba an'i Cookie Afeno ny fampahalalana momba ny Cookie
Tehirizo ny safidin'ny mpitsidika nofidiana tao amin'ny Cookie Box amin'ny Borlabs Cookie.
Ny cookies an'ny statistika dia manangona vaovao tsy mitonona anarana. Ity fampahalalana ity dia manampy antsika hahatakatra ny fomba ampiasain'ny mpitsidika ny tranonkalantsika.
Cookie avy amin'i Google ampiasaina amin'ny fanadihadiana an-tranonkala. Mamoaka angona statistika momba ny fampiasan'ny mpitsidika ny tranokala.
Cookie avy amin'ny Facebook ampiasaina amin'ny analytics an-tranonkala, ny kendrena amin'ny doka ary ny fandrefesana doka.
_fbp, Asa, c_user, datr, en, m_pixel_ration, fanononana, fanatrehany, Fahazavana, kofehy ireny, WD, xs
Fivoriana / 1 taona
Media ivelany (7)
Ny votoatiny avy amin'ny haino aman-jery sy ny sehatra media sosialy dia voasakan'ny default. Raha ekena ny mofomamy ivelany ivelany dia tsy mila fahazoan-dàlana ireo fidirana amin'ireo atiny ireo.
Nampiasaina hanakanana ny atin'ny Facebook.
Nampiasaina hanakanana ny atin'ny Google Maps.
Nampiasaina hanakanana ny atiny Instagram.
Nampiasaina hanakanana ny atiny OpenStreetMap.
Nampiasaina hanakanana ny atiny Twitter.
Nampiasaina hanakatona ny votoatin'i Vimeo.
Nampiasaina hanala ny atiny YouTube.
herin'i Borlabs Cookie
politika fiarovana fiainan'olona Imprint